That's so good, right?: November 2010
'ဟေး....Alex! အသင့်ဖြစ်ပြီလားဟ? လာတော့လေကွာ...မင်းအရမ်းကြာတာပဲ'
ဒီကောင်တွေကလည်း အရမ်းလောတာပဲ။ နည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးသွားတော့လည်း ဘာဖြစ်လဲနော်။ မနက်က ၀ယ်လာတဲ့ ဘောင်းဘီတွေထဲက အကောင်းမွန်ဆုံးတစ်ထည်ကို ကောက်စွတ်လိုက်တယ်။ Low-waist ဖြစ်ပြီး ရှိသမျှပစ္စည်းအထုပ်အထည်မြင်နိုင်တဲ့ Jeans ပေါ့။ အချာသတ် CK be ရေမွှေးလေး နည်းနည်းဖြန်းလိုက်ကာ တိုက်ခန်းတံခါးကိုပိတ် အောက်ကစောင့်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ အပြေးဆင်းလာလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲက အသစ်လွင်ဆုံး အလတ်ဆတ်ဆုံး club တစ်ခုကိုရွေ့ကြမလို့လေ။ ဒီ club ကအသစ် စက်စက် မဟုတ်ပေမဲ့ လူတွေအပြည့် နံရံကိုပေါက်ထွက်မယ့်အလားပြည့်နေမှာ သေချာပါတယ်။ DJ ရဲ့အစွမ်းက လူတွေဝတ်လာတဲ့ တီရှပ် တွေချွတ်ကာ ကဲကြတဲ့အထိစွမ်းတာ။ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် စုံဖြစ်ကြတဲ့ ညအများစုမှာ ကျွန်တော်တို့ ကကြတယ်၊ သောက်ကြ တယ်၊ ပါတီတွေရှိရင် ကဲကြတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးမသုံးကြပါဘူး။
Wow! ကလပ်ထဲ ၀င်လိုက်တာနှင့် တပြိုင်နက် မြူးကြွတဲ့ beat သံတွေ အမျိုးမျိုးဖြင့် လူအုပ်ကြီးယိမ်းထိုးနေတာ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု ၀င်ပြီး ကကြပြီပေါ့။ တစ်နာရီလောက် ကကြပြီးနောက် ဘော်ဒါတွေအားလုံး သူ့ဟာနဲ့သူ ဒီညအတွက် အဖော်တွေရသွားကြတာ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်ထားသွားကြရော။ ကျွန်တော်လည်းကပွဲကြမ်းပြင်က ထွက်ခွာလာရင်း ခုံလွတ်တစ်ခုမှာထိုင်ရင်း မျက်စိကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီည ငနဲတွေ အတော်များများ ဗလမောင်ပုံစံတွေချည်းပါပဲ ဘော်ဒီရှိုးပြနေကြတာ။ အဲဒါတွေက ကျွန်တော့် အကြိုက်ပုံစံတွေမဟုတ်။ ကျွန်တော်ရှာနေတာက ထောင့်ချိုးလေးတွေမှာ မ၀ံ့မရဲ အရှက်သည်းပြီး အလိုကျချုပ်ကိုင်လို့ရမယ့် လူတစ် ယောက်။ ကလပ်ထဲမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူ အချို့ကိုတွေ့ရပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကီးကိုက်မယ်မထင်ဘူး အားလုံး ဂျလေဘီတွေ။ ကျွန်တော်ဟိုသည်ကြည့်နေရင်း နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ယောက်ကို ဖန်မယ်လို့ စဉ်းစားမိစဉ်ခဏ ကောင်တာဘေးက ရုတ်တရက် ကွေ့လာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုင်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်စီက အရည်တွေ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ် ရွှဲကုန်ရော။
စိတ်တိုတိုနှင့် အော်ထည့်လိုက်ရင်း ကြည့်မိလိုက်တော့ မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ရပ်နေတဲ့ ကောင်ငယ်လေးကို မြင်ရတော့တာပဲ။ good တယ်! သူ ဟာ ကျွန်တော် ရှာနေတဲ့ လူပုံစံပဲ။ သူက ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အသက် ၂၀၀န်းကျင်လူငယ်လေး ဆံနွယ်တွေက လိမ်ကောက် ကောက်နဲ့။ အညိုရောင်မျက်ဝန်းတွေက လန့်ဖြန့်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေရဲ့လေ။
'တောင်း...တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကို...ဒီမှာ ညီ့လက်ကိုင်ပ၀ါ'
သူဘားကောင်တာစီ တစ်ခုခုလှည့်ပြီး စကားပြောချိန်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး အကဲခတ်ခွင့် ကျွန်တော်ရသည်ပေါ့။ မဆိုးပါဘူး ကျစ်ကျစ်လစ် လစ် ရှိသား။ လေ့ကျင့်ခန်းများများ ယူထားဟန်တူတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပါးပါးဟာ ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်နှင့် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ သူ့တင်ပါးအစုံ ကို ကြည့်မိချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် တံတွေးကို ခက်ခက်ခဲခဲမျိုချရပါပြီ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကြပ်ကြပ်ကနေ ရုန်းကန်ထွက်နေတာ များ။ ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့် ကြည့်နေဆဲ သူပြန်လှည့်လာကာ ကျွန်တော့်ကို လက်သုတ်ပ၀ါ ကမ်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖြစ်လက်စ အခြေအနေလေးကို ပိုမိုတင်းမာသွားအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
'ငါ ၀တ်လာတဲ့ ဘောင်းဘီက အကောင်းစားကွ မင်းသိလား?'
'တကယ်တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကို၊ ညီ အမှတ်တမဲ့ လှည့်လိုက်ရင်း ဖြစ်သွားရတာပါဗျာ'
ကောင်လေး တကယ့်စိတ်ရင်းနှင့် တောင်းပန်နေမှန်း ကျွန်တော်သိတယ်။ လက်မောင်းကို ဆွဲကိုင်ကာ ကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ သူ့ကိုပြောပြီး ဆွဲခေါ်ခဲ့တာပေါ့ ဘာရမလဲ။ ကျွန်တော် ဦးဆောင်တဲ့အတိုင်း မငြင်းဆန်ဘဲ သန့်စင်ခန်းထဲထိလိုက်လာပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းထဲက နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ထွက်သွားပြီးတာနှင့် သူ့ကိုအထဲသွင်းလိုက်ကာ ကန့်လန့်ချလိုက်ပါရဲ့။
သူဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားအောင် ကျွန်တော်အရိပ်အမြွက်ပြလိုက်တာ သူကျွန်တော်ပေးတဲ့အထာကိုပေါက်စွာ အမိန့်ကိုနာခံ ဒူး ထောက်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကောင်လေးက အရိပ်ပြအကောင်ထင်တဲ့ လူစားမျိုးလေးပဲ။ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသာဆွဲ ချွတ်ပေးရမယ်မှန်းလဲ သူသိတယ်။ ဘောင်းဘီကိုအကုန် ချွတ်ပေးပြီးမှ သူလုပ်ပေးတာမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အထာနှင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အကဲခတ်တယ်လေ။
'ကောင်လေး ငါ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်မနေနဲ့ စုပ်စမ်း-ီးကို'
အဲဒါ ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့အရာအတိအကျပဲ။ သူကျွန်တော့်အတွင်းခံ boxer အပေါ်ကနေ လက်ကလေးနှင့် ပွတ်သပ်တယ်။ ဖောင်း ကြွလာတဲ့ ငပဲကိုရော၊ ရွှေဥတွေကိုရော နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ထိတယ်။ မရဲတရဲသူ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေက ကျွန်တော့်ငပဲကို တဖြည်းဖြည်း မာလာစေသား။
အတွင်းခံဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အသာကိုင်ပြီးအောက်ကိုအသာသူဆွဲချလိုက်တော့ မပျော့မမာ ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း ငေါက်ကနဲပေါ်လာပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့သွားတာလား သဘောကျသွားတာလားမသိ ကောင်လေးမျက်ဝန်းတွေက '၀'လုံးဖြစ်သွားကာ ခဏတော့ ငေးကြည့်နေပါသေးရဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ကို ဘာဆက်လုပ်ပါဆိုတာ အမိန့်မပေး။ ဒါပေမဲ့ သူကျွန်တော့် ငပဲကို အသာကိုင်ရင်း နှုတ်ခမ်းအစုံဖြင့်ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငုံစုပ်လိုက်ပါရော။ စိုစွတ်နေတဲ့ သူ့လျှာဖျားလေးနှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝက အပေါက်လေးကိုကစားပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေသုံးပြီး ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ကစားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်မျက်ဝန်းတွေ ကို အသာမှိတ်ကာ အရသာခံမိတာပေါ့လေ။ ကောင်လေးက ခပ်ငယ်ငယ်နှင့် ဒီကိစ္စမှာ အတော်ကျွမ်းကျင်တာပါလား။ သူကျွန်တော့်ငပဲ ကို ထိပ်ဝလေး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေပြီးနောက် တစ်ချောင်းလုံး လည်မျိုထဲရောက်တဲ့အထိသွင်းပြီး ကစားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်သူ့ဆံနွယ် ရှည်ရှည်တွေကို စုကိုင်ဆွဲပြီး အထုတ်အသွင်း ခပ်သွက်သွက်လုပ်မိပါတယ်။
'Fuck!! Mmm...မင်းပါးစပ်က စွမ်းလှချည်လားကွ၊ မင်း-ီးစုပ်ရတာကြိုက်တယ် ဟုတ်?'
'အ....ရော့ condom ကိုစွပ်ပေး။ မင်းသွားနဲ့ ထိခိုက်မိရင်နာတယ်ကွ ၊ မင်းလည်းပါးစပ်ထဲ မညစ်ပတ်ရဘူးပေါ့'
သူ့ခမျာ ပါးစပ်ကအဖြေမပေးနိုင်ပါဘူး။ 'uhuh!' လို့ပဲ အသံပြုနိုင်ရဲ့။ လက်တစ်ဖက်က သူ့ဘောင်းဘီဂွဆုံက ငပဲကို ကိုင်ဖို့အောက် ကိုလျော သွားတာကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်တော့ အဲဒီလက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ 'မင်း -ီးကို မင်းဖာသာကိုင်ပြီး ကစားလို့ ငါပြောလို့လား?' နာကျင်သွားတဲ့ သူ့လက်ကိုအသာပွတ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကာ အမိန့်ကိုနာခံပါပြီ။ သူကျွန်တော့် ငပဲကို ဆက်ပြီးပြုစုတာ ဒီတစ်ခါတော့ အရမ်းကိုပြင်းထန်သလားပဲ။ ခပ်ဖြေးဖြေး မဟုတ် ရွှေဥတွေကိုပါတစ်လုံးခြင်းငုံကာ ကစားသေး တာ။ အဲဒီလိုလုပ်ပေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ မထိန်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့ ကြာရှည်။ သူ့လျှာလေးနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ကို တစ်ချက် ကလိစဉ် မှာပဲ ပါးစပ်ထဲကို အဲ...condom ကစွတ်ထားတာဆိုတော့ အဲဒီထဲကို အားရပါးရပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ အစွပ် စွတ်ထေားလို့ တော်သေး တာပါ ကျွန်တော့်ရဲ့အသွင်းအထုတ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြောင့်ရော ကောင်လေးရဲ့ အစုပ်အမှုတ်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ရော ကျွန်တော့် ငပဲ ပွန်းပဲ့ သွားနိုင်လောက်တာမို့။ အခုတော့.'..အ...အ' ကျွန်တော့်ခြေချောင်းလေးတွေကွေးပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါမတတ် အားရစွာပြီး မြောက်သွားပါပြီ။
ကောင်လေးပခုံးကိုဆွဲထူပြီး မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်ရင်း အိမ်သာကြွေကမုတ်ရဲ့နောက်ဘက်အစွန်းကို အားပြုကိုင်စေကာ ခပ်ကုန်းကုန်းနေ စေလိုက်ပါတယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝတ်ထားတဲ့ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကြောင့် လုံးကျစ်တင်းရင်းနေတဲ့ တင်သားခပ်ထူထူတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ရပါတယ်။ လုံးဝန်းနေသော သူ့တင်ပါးကို ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ကာ ကောင်လေးဘာတုန့်ပြန်မလဲ ကျွန်တော်အကဲခတ်လိုက်ပါရဲ့။ ပါးစပ်က တိုးတိုးညင်သာ ညည်းတွားရင်း နောက်တစ်ချက်တွန့်တာကလွဲလို့ သူဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ ဂျင်း ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပေါ်လာတဲ့ အတွင်းခံ brief ဘောင်းဘီတိုပေါ်ကနေ လုံးဝန်းနေတဲ့ တင်သားလေးကို အသာအယာပွတ်သပ်ပြီး ခရေ၀ရှိရာနေရာကိုလည်း ခပ်ဖွဖွကလိလိုက်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မှေးမှိတ်ကာ အသက်ရှူသံတွေပြင်းထန်လာပါရော။ ကျွန်တော်မြင် နိုင်ခဲ့တာက ကောင်လေးငပဲဟာ အလွန့်ကို မာထောင်ပြီး ဘောင်းဘီကနေ ကျော်လွန်ဖောက်ထွက်မတတ်ဖြစ်နေတာကိုပေါ့။ ကျွန်တော်ကောင်လေးအတွက် သာယာမှုကိုလည်းပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ သူလေးငပဲကို လှမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပူနွေးပြီး မသိမသာတုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးက ကိုင်လို့မဆိုးဘူးဗျ။
ကောင်လေးကျွန်တော်လုပ်သမျှ လိုက်လျောနေတာ ပြုံးတောင်ပြုံးမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကစားပေးနေမိတာမှ တင်ပါး တွေကို ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာ ' အား' လို့အော်ကာ ခါးကော့သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်ခပ်ကြမ်းကြမ်း တစ်ချက်ဟောက်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးကို နောက်တင်ပါးတစ်ဖက်စီပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ တင်ပါးကို ဆက်ပြီး တဖြန်းဖြန်းရိုက်နေတာ တင်ပါးပြင် ရဲရဲနီလာတဲ့အထိ။ တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တိုင်း နောက်ကိုတွန့်တွန့်သွားကာ ပါးစပ်က အော်သံ တစ်ချက်တစ်ချက် ထွက်လာတယ်။ သူ့ခမျာ အသံကျယ်ကျယ်အော်မိရာကနေ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကိုက်ထားရင်း ဆက်မအော်မိအောင် ထိန်းတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း တင်ပါးအိအိတွေကို တစ်ချက်ခြင်းရိုက်တာ။ တင်ပါးတွေက အရောင်နီရဲရဲနှင့် တဆတ်ဆတ်တုန်သလို သူ့လဒစ်ကနေ အရည်ကြည်ရွှဲနေအောင် ထွက်နေပါရဲ့။ သူအထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလာတာကြောင့် ကျွန်တော် နာကျင်တဲ့ဖီလင်ကို တင်ပါးတွေို့ ခပ်ဆတ်ဆတ် တစ်ချက်စီရိုက်ရင်း ဆက်လက်ပေးပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကိုက် အံကြိတ်ရင်း သူ ထိန်းပေမဲ့ နောက်ဆုံး သူ့မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ ပေါက်ပေါက်ကျကာ ငိုသံထွက်လာပါရော။
သူ့ကိုကလိရတာ တော်လောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း သူ့ပစ္စည်းကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်ကစား ပေးတဲ့ခဏ သူ့အသက်ရှူသံတွေမြန်ဆန်လာကာ သူ့ရွှေဥထဲမှာရှိသမျှ သွန်ချလိုက်တဲ့အတိုင်း အိမ်သာကြွေကမုတ်အဖုံးတွေ၊ ကြမ်းပြင် တွေပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းက တစ်ခါပန်းထုတ်တိုင်း အော်သံ ပိုပိုကျယ်လာပါရဲ့။ နောက်ဆုံး အကြိမ်လို့ယူဆတဲ့ အချိန် ရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီပြန်ဆွဲတင် အ၀တ်တွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ သန့်စင်ခန်းကထွက်ခွာလာခဲ့ပါရဲ့။ သူလေးကတော့ နီရဲနေသော တင်ပါးအစုံနှင့် ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားဖြင့် ကျန်ခဲ့သည်ပေါ့။
club ကနေ ကျေနပ်စွာ၊ အလိုဆန္ဒပြည့်စွာဖြင့် ပြန်ခဲ့ပါတယ် အိမ်ကိုပေါ့။ အကယ်၍များ ဒီကောင်လေး နက်ဖြန်ည လာမယ်ဆိုရင်......
Alex Aung ( 26-11-2010)
Posted by Alex Aung at 3:24 PM2comments:
လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရရှိဖူးတဲ့ အလုပ်များစွာထဲမှာ တစ်ခုရဲ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေရတာလောက် ကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဏ္ဌာရေးဘတ်ချက်ကို ထိကိုင်စရာမလို အသင်းဝင်ကြေးက အခမဲ့၊ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် အဟာရ ပညာရှင်များဆီက ကောင်းနိုးရာရာနည်းလမ်း၊လေ့ကျင့် စားသောက်ပုံစံများကို သိရှိရသည်သာမက ခပ်ဟော့ဟော့ အမျိုးကောင်းသား တွေကို ကြည့်မြင်ရတာလေ။ (ဟုတ်တယ်...ကြည့်လေ ကျွန်တော်တို့ဟာ gay တွေနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိသော်လည်း ဒီမှာရှိတဲ့ ခပ်ဟော့ ဟော့ငနဲတွေ အားလုံးက straight တွေဗျ။) ကျွန်တော့်ကိုယ်ကာယကတော့ မပိန်မ၀လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထားပါ။ အစဉ်တစိုက် အားဖြင့် လှပကြံ့ခိုင်သောကိုယ်ကာယ၊ အားကစားနည်းပြများနှင့် အသင်းဝင်တွေ ၀ိုင်းရံနေခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ မမှတ်မိအောင် အလွန့်အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ လူတွေ ရပ်နေခဲ့တာ အပါအ၀င်။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ၆၀%အသင်းဝင်များဟာ အမျိုးသားကြံ့ခိုင်ရေး အသားပေး catalog များမှာ လစဉ်ပါဝင်နေကြသူများ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ကြည့်ရတာ ဒီအားကစားကို အရူးအမူးဖြစ်နေကြသူများပါ။ ကျွန်တော် gym တွေအတော်များများမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလက်ရှိ gym က member များလောက် သိပ်မဟော့တ်ကြပါဘူး။
အခု ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်သတိထားမိတာက စုတ်ချာချာဘော်ဒီပိုင်ရှင် မဟုတ်တော့ပါဆိုတာပါပဲ။ gym တစ်ခုမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အလုပ် စရခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်က စတင်လေ့ကျင့်ကစားဖြစ်စဉ်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့သေးတာ။ ကျွန်တော့်အရပ်က ၅ပေ ၉လက်မ၊ ၁၇၃ ပေါင်၊ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၂၃%က အဆီရှိခဲ့တယ်လေ။ လက်ရှိမှာတော့ အသက်က ၂၈နှစ်၊ အရပ်အမြင့်က ယခင် ကနဲ့အတူတူ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၇၅ ပေါင်၊ နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၅%သာအဆီရှိတော့တယ်။ နည်းနည်းတော့ အင်တိုက် အားတိုက် တိုး တက်လာခြင်း တစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ ဆံပင်တိုထောင်ထောင်နှင့် အညိုရောင်ညှို့မျက်ဝန်းတွေပိုင်ဆိုင်ပါ တယ်။ ရင်အုပ်မှာ အမွှေး နည်းနည်းသန်တာ ဗိုက်သားနှင့် ဆီးစပ်မှာလည်း အမွှေးနုလေးတွေရှိပါ့။ နေ့တိုင်း ကျွန်တော့်မေးရိုးတလျှောက် ရိတ် သင်ပေးရသလို ညနေ ၅နာရီဝန်းကျင်ဆိုရင် အစိမ်းရောင်သန်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးအသွင်အပြင်တွေကတော့ တင်း ရင်းဖောင်းကြွတဲ့ တင်သားနှင့် သန်မာတဲ့ ကြွက်သားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ခြေတံများပါပဲ။ ၁၆နှစ်လောက် ဘောလုံးကန်ခဲ့ တာဆို တော့ တင်းရင်းဝိုင်း စက်ကာ ကျစ်လစ်သော bubble-butt နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းပုံရိပ်က ထင်းနေတာ။ဒီလိုပုံသဏ္ဌာန်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေလို့လည်း ခပ်ဟော့ဟော့ငနဲတွေက သက်သောင့်သက်သာ ဆွေးနွေးနိုင်ကြတာ အကြံဥာဏ်တွေရယူဖို့ သူတို့လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အားကစား အမျိုး အစားတွေမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်။
ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်အလုပ်လုပ်ကြတာဆိုတော့ တစ်ခါတလေ သူတို့ကို တာဝန်ယူနည်းပြလုပ်ဆောင်ပေးသူတွေ မအားလပ်သေးရင် ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ပြီး ကူညီပေးရတတ်တယ်။ အဲဒီလို အချိန်တွေဆို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အတွင်းကျကျ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မမြင်ချင်လည်းမြင်ရတာပါပဲ။ တစ်ခါတလေ သူတို့ကိုကြည့်ရင်း ညီဘွားက တဒိတ်ဒိတ် ခုန်ခုန်ထလာရော။
လူအများကြီးကို အသာထားပါဦး အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အမြဲတစေ သွေးတိုးစေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့ နာမည်က 'ဝေဖြိုး' အသက် ၂၅နှစ် အရပ်က ၆ပေ ၂လက်မ၊ ၂၃၅ပေါင်၊ ရှုပ်ပွပွဆံပင်ဒီဇိုင်း တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းနှင့် သူ့အပြုံးကိုမြင်ရရင် ထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျသွားလောက်တယ်။ သူ့ကျောပြင်က 'V' ပုံသဏ္ဌာန် တည်ဆောက်ပုံက ကောင်းသလို အဆီနည်းနည်းရှိတာ ကလွဲလို့ သဘာဝအတိုင်းထွားကျိုင်းသူပါပဲ။ အားကစားလုပ်တဲ့အခါ quarter ဘောင်းဘီပျော့၊ တီရှပ်လက်ပြတ်နှင့် ကစားတတ်တာ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ချောမွေ့လွန်းတဲ့သဘာဝရှိပြီး အမွှေးအမျှင်ဆိုလို့ အလယ်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုပဲ ဘောင်းဘီတိုထဲမှာ လမ်းဆုံးသွားတာ။ ဒီ Gym ကို တစ်ပတ် ၆ရက်လာတယ်၊ တစ်ရက်ကို နှစ်ကြိမ်ဆိုတော့ အတော်ကြိုးစားသူလို့ဆိုရမယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ထိုင်နေကျ စားပွဲခုံက နေ စက်ပစ္စည်းတွေနှင့် လေ့ကျင့်ကစားနေတာကို မြင်ရသလို တစ်ခါတလေ free weight တွေနှင့် လေ့ကျင့်ကစားရင်တော့ ကျွန်တော် ကူညီပေးရတာပေါ့။ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာပါပဲ။ တစ်ယောက်ယောက် နှင့် စကားပြောနေတယ် ဆိုတာ ရှားပါရဲ့။ နားကျပ်လေးနားမှာ IPod တပ် သီချင်းနှင့်အတူ အားကစားမှာမျောနေတတ်တာ။ ပထမဆုံးအကြိမ် သူ့ကိုကျွန်တော် စကား ပြောဖြစ်တာက သူအနေအထားမှားနေခြင်းကို ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး အလွန်တတ်သိနားလည်လွယ်ပြီး၊ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သူပါ။ သူနှင့်ကျွန်တော် မှာ စကားပြောဖြစ်တာ ၁၀မိနစ်ထက်မပို။
တစ်ရက်မှာတော့..သူအားကစားလေ့ကျင့်ပြီးသွားချိန် ကျွန်တော့်စားပွဲကိုလာလိုက်ကာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေဘယ်လောက်ရှိသေး လဲတိုင်းတာဖို့ နည်းပြဆရာတစ်ယောက်လောက်မရှိဘူးလားမေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီအချိန်ဟာ နည်းပြတွေ ထမင်းစားသွားချိန် လာ ကစားသူတွေ သိပ်မရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အနီးအနားမှာ မရှိကြဘူးပေါ့။ အခုလောလောဆယ် ဘယ်သူ မှ အနားမှာမရှိကြောင်း၊ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သူ့ကို တိုင်းတာပေးနိုင်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ပါက နောက်တနေ့မနက်မှ လာကစားတဲ့ အခါ နည်းပြတစ်ယောက်က စစ် ဆေးပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူက နက်ဖြန်အလုပ်ရှုပ်မှာ ဒီတော့ အခုသူရေချိုးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် check ပေးဆို ပြီး ပြောပါရော။
ကျွန်တော်တို့ Gym ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ ကိုယ်ပိုင် အ၀တ်လဲခန်း၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရေချိုးနိုင်တဲ့ သန့်စင်ခန်း၊ hair-dryers, လိုအပ်ရင် တိုက်ဖို့ မီးပူစသဖြင့် အသင်းဝင်တာနဲ့ ရရှိမယ့် အရာတွေပါ။ (ရေချိုးအိမ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ရပါဘူးနော်။) မိနစ်၂၀လောက် အကြာမှာတော့ 'ဝေဖြိုး' အဖြူရောင် တဘက်ကြီးတစ်ထည်ခါးမှာပတ်လို့ ထွက်လာပါတယ်။
ခါတိုင်း တင်းရင်းရင်းနှင့် ရင်အုပ်တွေပေါ်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ခပ်ကျပ်ကျပ် bodysize တီရှပ်တွေအပေါ်ကသာ ငေးနေခဲ့ရတာ အခုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို မြင်ရပါပြီ။ ကြွက်သား အဖုဖုထုထုပြီး ခရာချင်စရာနယ်ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ခပ်မတ် မတ်ရပ်နေပါရော။ အတိုင်းအတာ အခြေအနေစစ်ဆေးဖို့ အသင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြုံးပြမှ ကျွန်တော်လိုအပ်ပစ္စည်းတွေ ယူဆောင်ကာ သူ့အ ၀တ်လဲခန်းထဲ လိုက်သွားပါတယ်။ သူက ငါးနေရာလောက် တိုင်းတာပေးရမှာ အဆင်ပြေမလားတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း 'အိုကေ'လို့အဖြေ ပေးကာ သူ့ပခုံးအကျယ်ကို နောက်ဖက်ကနေ စတိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပခုံးပေါ်ဝေ့၀ဲကျနေသော ဆံနွယ်များမှ ရေစက်အချို့ဟာ နောက်ပိုင်းကြွက်သားမြှောင်များမှ တဆင့် တလိမ့်လိမ့်ဆင်းကာ လုံးဝန်းတင်းကျစ်နေသော တင်သားများကို ပတ်စည်းထားရာ တဘက် ကြားထဲ ၀င်ရောက်သွားတာကို မြင်ရတာပေါ့။ အသာအယာပွတ်သပ်ရင်း သူ triceps တွေပေါ်က လက်မောင်းနောက်သားကို ဆက်ပြီး တိုင်းထွာ။ နောက်တစ်ကြိမ် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီငနဲ အဆီလုံးဝမရှိ။ သူ့တခြားအ စိတ်အပိုင်းတွေကို တိုင်းတာမှတ်သားပြီး အဖုအထစ်နှင့် အမြှောင်းထနေသော ဗိုက်ကြွက်သားကို ဆက်ပြီးတိုင်းတာ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျွန်တော် တိုင်းတာကြည့်ရှုပေးနေချိန်မှာ စကားစမြည်လှမ်းလှမ်းပြောနေပေမဲ့ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတာကြောင့် 'အင်း...ဒီလိုပေါ့' လို့ပဲဖော်လိုလုပ်ရပါရဲ့။ နောက်ဆုံး သူ့ပေါင်အတွင်းပိုင်းကြွက်သားကို တိုင်းတာဖို့ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အ သင့်အနေအထား ပေါင်ကို ကားထားပေးမယ်မျှော်လင့်ထားတာ တဘက်ကိုတောင် ဟမပေးသလို ရပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်သူ့ကို မော့ကြည့်လိုက်စဉ် ခါးမှာပတ်ထားသော တဘက်ကို မြေပြင်ပေါ်လျှောကနဲ ချလိုက်ကာ အံ့သြသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါ့။ ကျွန်တော့် မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာပေါ်လာတာက ၆လက်မကျော် ငပဲပျော့ပျော့ကိုပေါ့။ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းက သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ထားတာ ကြောင့် အနံ့လေးက တစ်မျိုးရနေပါတယ်။ ဒူးဆစ်၊ ခြေသလုံး၊ ပေါင်အတွင်းပိုင်းကြွက်သားများကို တိုင်းတာနေစဉ်မှာ သူ့ငပဲက တဖြည်း ဖြည်း တုတ်လာသလိုပဲ ကြည့်ရတာ။ ပထမတော့ သူ အဲဒါကို သတိမထားမိဟန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာ ကြောက်ဖို့ တောင်ကောင်းရဲ့။ သူ မရှက်သွားအောင် ကျွန်တော်ဟာသလေးတွေ နှောရတော့တာပေါ့။
သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို သတိထားမိဟန်ဖြင့် သဘောတကျရယ်မောရင်း သူ့ပစ္စည်းသူ ပီတိဖြစ်စွာကြည့်လိုက်ကာ ကြွားပြီးရင်း ကြွားတော့တာပဲ။
'၇လက်မကျော်တယ်ဗျ၊ ဘယ်သူ့မှာ အဲဒါကြောင့် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ'
ကြားလိုက်ရတာ နားကြောထဲစိမ့်သွားတာပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကတော့ ၇လက်မ? ၇လက်မတောင် ရှည်တယ် Oh my God! အဲဒီငပဲ ကြီးကို စုပ်ချင် လိုက်တာ လို့ပြောမိပါရဲ့။
ကျွန်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးတိုင်းတာဖို့ပြင်ပါတယ်။အခုလို နှစ်ကြိမ်လောက် ပြန်တိုင်းတာရတာက ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစားအနေအထား ပိုမိုသေချာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့လူ...သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ တိုင်းတာပေးနေတဲ့သူကို အ မြှောက်နဲ့ချိန်ကာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ သူ့ကောင်မလေးအကြောင်းရယ်၊ တစ်နေ့ နှစ်ခါလောက် -ွင်းထုတာတောင် သူ့လိင် စိတ်က အခြေမငြိမ်သေးဘူးဆိုတာတွေရယ်ပြောနေသေးတာလေ။
စကားပြောရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ လုပ်ချင်လာတာ နှစ်ခုရှိတယ်။ (၁) ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းတဲ့သူ့ ex-girlfriend အကြောင်းစိတ်ဝင်စားချင်ယောင်ဆောင်ပေးခြင်း (၂) ကျွန်တော် သူတို့တွေထက် သာယာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာ ထင်ရှားချင်တယ်....ထင်ရှားစေချင်တာ။
'အင်း အစ်ကိုကတော့ အမျိုးသားတွေအပေါ် ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကွ။ ကိုယ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာသိတယ်၊ တစ်ခြား အမျိုးသားတစ်ယောက် ပျောရွှင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်'
ကျွန်တော် အဲဒီစကားကို ပြောလိုက်ပြီး သူဘာတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်မိပါရဲ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ တစ်ခုခုတော့ တွေ့ တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု သို့မဟုတ် shock ဖြစ်သွားခြင်းလား? ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီက ဘာတုန့်ပြန်သံမှ မကြားရဘူး။
'ဒါဆို.....အစ်ကိုက gay ပေါ့ဟုတ်လား?'
ကျွန်တော်က ဟုတ်တယ်လို့ပြောပြီး သကာလ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်ခြင်း ညာဖြစ်ခြင်းသည် အခုပြုလုပ်နေဆဲကိစ္စတွေအပေါ်နှင့် သူ့အပေါ် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောလိုက်ရပါတယ်။ သူကလည်းပြောပါတယ် သူအရင်က gay တစ်ယောက်နှင့် သိ ကျွမ်း ခင်မင်ခဲ့ဘူးကြောင်း လူတွေအပေါ် ကန့်သတ်ချက်နှင့် မပေါင်းသင်းပါကြောင်းပေါ့။
'Wow! ညီ အစ်ကို့ကို လုံးဝထင်မထားဘူး။ ကျွန်တော်ခင်တဲ့ ဂေးတစ်ယောက်ကတော့ ဟာသတွေအမြဲပြောပြီး မိန်းမဆန်တယ်ဗျ'
'Yeah, အစ်ကိုက Dick ကိုကြိုက်တာလေ။ Gay ဆိုတာက လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်တာ အဓိကလေ မိန်းမဖြစ်ချင်နေသူသက်သက်တွေမှ မဟုတ်တာဘဲကွ'
နှစ်ဦးသား ရယ်မောကြပြီးနောက် ကျွန်တော်တိုင်းထွာနေတာကို အပြီးသပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲကတော့ မတ်နေဆဲ။ ကျွန်တော်သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်အတိုင်းအတာ အခြေအနေတွေကို ပြောပြရင်း စနောက်လိုက်ပါတယ်။ 'ဒါကြီးကိစ္စမင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ?' ပေါင်ကြားထဲကနေ ကျွန်တော့်ကို ညွှန်ပြနေတဲ့ အမြှောက်တံကြီးကို ရည်ရွယ်လိုက်ပြီး။ ဘော်ဒါက သူ့ငပဲကို လက်နှင့် ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင် တစ်ချက် နှစ်ချက်တော့ ထုလိုက်သေးတယ်။
'အာ...ညီ ဒီလိုပုံစံကြီးနှင့် အပြင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူး။ လက်မောင်းအတွက် ကစားလက်စတန်းလန်းကြီး၊ အဲဒါ ညီဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး'
သူကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ပြောတာ မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး 'အစ်ကိုမင်းရဲ့ ပေါင်အတွင်းကြွက်သားတွေကို သေချာမတိုင်းမိဘူး၊ ပြန် တိုင်းရမယ်' လို့ပြောလိုက်တယ် သူ့ရှေ့တစ်ခါတည်း ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရင်းပေါ့လေ။ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်လုံးကို အတိုင်းအတာစမ်းစစ် သယောင်ပြုလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံ ထက်အောက်ရွှေ့ပစ်လိုက်တိုင်း သွေးခုန်နှုံးကြောင့် တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး မတ်နေတဲ့ သူ့ ငပဲကို ခလုပ်တိုက်နေမိပေါ့။ ကျွန်တော့်လက်တွေရဲ့ ပွတ်သပ်ထိခိုက်မှုတွေကြောင့် သူနောက်တွန့်သွားတာ ရွံ့သွားတာမဖြစ်ဘဲ မတ် မတ်ရပ်မြဲအတိုင်းရပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့် နှာခေါင်းမှ ထွက်နေသော အသက်ရှူငွေ့နွေးနွေးဟာ သူ့ငပဲကို ထိခတ်နေတာအမှန်။ 'ဟင်း...' ကနဲ သူ့သက်ပြင်းချသံကြားရတာကြောင့် ကျွန်တော် သူ့မျက်ဝန်းတွေဆီ မော့ကြည့်လိုက်တာ ကောင်လေး မျက်စိမှိတ်ပြီး ခေါင်းကို အပေါ်မော့ထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လေးမှာ ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်သော စိတ်ကိုဖွင့်ချလိုက်ပါရဲ့ သူ့ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနှင့် အသာတို့ရင်း ထိပ်ဝလေးကို ကလိလိုက်တော့တာ။
တကယ်တမ်း သူနောက်ဆုတ်ပြီး ငြင်းဆန်သွားမလား စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင် ကာ သူ့အတံကြီးကို အာခံတွင်းထဲ လျှောကနဲ သွင်းလိုက်တာ လည်မျိုထဲထိ ရောက်ကရော။ ကျွန်တော် အာခေါင်ထဲထိ ရောက်သွားတာ ကို ပြန်မထုတ်ဘဲ ငြိမ်နေကာ အသက်ရှူရတာ တစ်မျိုးဖြစ်လာတော့မှ ဆွဲထုတ်ကာ ချောင်းဆိုးမိပါရော စက္ကန့်နည်းနည်းလောက်ပေါ့။ သူ သည်လည်း ခဏတော့ကြောင်သွားပြီးနောက် အားရပါးရရယ်မောပါတော့တယ်။ 'ဘော်ဒါကြီး ခင်ဗျားလုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာပဲဗျ' မျက်နှာက ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ သူ့ခံစားချက်ကိုရှင်းပြနေတာ။
'ဒါဆို ဆက်လုပ်ပေးရမလား? လုပ်ပေးစေချင်လား?'
'အား...သေချာတာပေါ့ဗျ' ပါးစပ်ကလည်း ပြန်ဖြေရင်း ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကို သူ့ငပဲစီပြန်ဆွဲယူကာ ပြုလုပ်လက်စအလုပ် ဆက်လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ခါးအစုံကို ထိန်းကိုင်ကာ အ၀တ်လဲခန်းနံရံကို ကျောကပ်စေလိုက်ပါတယ်။ ပြောနိုင်တာက သူ ကျွန်တော့်ပြုစုမှုကို ဒီထက် ပိုငံ့လင့်နေပြီဆိုတာပါပဲ။ ခပ်ထွားထွားငပဲကို ကျွန်တော့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် အတူ လျှာတစ်ချောင်းလုံးသုံးကာ အလုပ်ရှုပ်စေပါတယ်။ သူ့ ခါးအစုံကိုတော့ ထိန်းကိုင်ထားကာ စိုစွတ်ပူနွေးတဲ့ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းထဲ အသွင်းအထုတ် ပုံမှန်လုပ်စေပါ တယ်။ သူလည်း ပုံမှန် အရှိန်လေးနှင့် အထုတ်အသွင်းလုပ်ရတာ ကြိုက်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ လျောကနဲ သွင်းလိုက်တာ လည်မျိုထဲရောက် ရောက်သွားတာ ကြောင့် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းနှင့် သူ့ဆီးစပ်က ချုံပုတ်ထိကပ်ရတဲ့အထိပါပဲ။ မဆိုးပါဘူး ရတဲ့အနံ့လေးက ကျွန်တော့်စိတ် ကို ပိုမိုထကြွ စေသား။ မတ်ထောင်နေတဲ့ ငပဲကို ပါးစပ်အတွင်းမှထုတ် ဆီးစပ်မှာကပ်နေအောက် ဘယ်လက်နှင့် ထိန်းထားကာ လုံးဝန်း ကြီးမားတဲ့ ရွှေဥတွေကို ညာဘက်လက်နှင့် အသာပွတ်သပ်ကြည့်မိတာမှာ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မှေးမှိတ်သွားပါရော။ အရွယ်ညီသလိုဖြစ်နေ ပေမယ့် အနည်းငယ်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ရွှေဥကို ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေနှင့် ပွတ်သပ်ပြီး လျှာကို အပြားလိုက်ထုတ်ကာ လျက်မိ တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက အသံတွေနည်းနည်းထွက် ညည်းညူပါတော့တယ်။ တစ်လုံးခြင်းကို ငုံစုပ်လို့ အားရပြန်တော့ ရွှေဥတွေကိုမ ကာ ရွှေဥနှင့် ခရေ၀ကြားနေရာကို နှုတ်ခမ်းတို့ လျှာတို့ဖြင့် ပွတ်သပ်ချော့မြူပြန်တော့ ဝေဖြိုး တစ်ယောက် အသက်ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူ ထုတ်မှုတွေ ပြင်းထန်လာရင်း အသံထွက် ညည်းတွားပါရော။ ဘယ်အမျိုးသမီးကမှ ဒီလို မက်မက်မောမော စိတ်လိုလက်ရ ပြုစုပေးမယ် မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ သွေးတိုးမှုကြောင့် တဆတ်ဆတ်ခါနေသော သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်ဆက်ပြီး စုပ်မှုတ်ချိန်မှာတော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ကို လက်ဖ၀ါးတွေကိုသုံး ပွတ်သပ်မိပါရော။ ဗိုက်သားတွေ၊ ရင်အုပ်တွေ၊ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ။
မိနစ်အနည်းငယ်လောက် သူ့ငပဲနှင့်အတူ အလုပ်ရှုပ်ပြီးနောက် မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ သူ့ abs ၊ သူ့နံဘေးကြွက်သားတွေအပြင် တစ်ကိုယ်လုံးရှိအရေပြားအနှံ့ ဖွဖွကိုက်တယ်၊ လျှာဖျားလေးနှင့် ကလိတယ်၊ ပြီးတော့ နမ်းတယ် ကျွန်တော်လုပ်ချင်သလို။ လက်မောင်း ကြီးတွေက ကြွက်သားမြှောင်းတွေကို နမ်းစဉ်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ပိုဆူညံလာတယ်ထင်ရဲ့။
အရပ်မြင့်မြင့် သူ့ပခုံးကို ကျွန်တော့်ဘက်ဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်း ထိခတ်ဖို့ကြိုးစားတော့ သူရပ်တန့်လိုက်ကာ 'ညီ နမ်းဖို့ အဆင်မပြေဘူး ထင်တယ် အစ်ကို့ကိုအခု'
ကျွန်တော် ဘာတုန့်ပြန်မှုလုပ်ရမလဲ မသိ ငြိမ်သက်သွားမိတယ်။ ဟုတ်တာပဲ သူနဲ့ကျွန်တော် ချစ်သူတွေမှ မဟုတ်တာ နမ်းဖို့ဘယ် အဆင်ပြေပါ့မလဲ။
လှုပ်ရှားမှုမရှိ မလှုပ်ရှားတော့ဘဲ ငြိမ်သွားမိတော့ 'ဝေဖြိုး'ဆိုတဲ့ သူ ကျွန်တော့် ခါးစပ်က အင်္ကျီစကို အသာကိုင်ချွတ်ပြီး ဦးခေါင်းပေါ်ကနေ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီကို အတင်းချွတ်တာဆိုတော့ အသားအရေတွေတောင် နာသွားရပြီးနောက် သူကျွန်တော့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါ အောင်ဖက်ကာ နံရံဆီဆွဲကပ်ပါရော။ သူ့လက်ဖျံနှင့် ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ကိုတွန်းကာ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု အနည်းငယ်ခွာ တစ်ကိုယ်လုံးကို အကြည့်စူးဖြင့်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်အုပ်က နို့သီးခေါင်းဆီ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ကစားလေတော့ ရင်ထဲ တလှိုက်လှိုက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက ကိုယ်နံ့တွေနှင့် အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းများကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုထကြွစေသလားပဲ။ တခြားသော သူ့ လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီ ခါးပတ်စီ ရွေ့သွားရင်း ဆွဲဖြုတ်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ကာ ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဘောင်းဘီက ကျွန်တော့်ခြေချင်းဝတ်မှာ ပုံကနဲ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ၀တ်လေ့မရှိသောကြောင့် သူမြင်လိုက်ရတာက အမြှောက်တံ ကြီးချိန်ရွယ်နေတာကိုပေါ့။
ကျွန်တော် အဲဒီလို ရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်သွားတာကို သူမြင်ပြီး shock ဖြစ်ကာ တွန့်သွားဦးမယ်ထင်တာ သူက နောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆုတ် ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလေရဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လည်ဂုတ်တွေကို နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ပွတ်သပ်ကာ သူ့လက်အစုံနှင့် ချွေး စို့နေတဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခပ်မာမာဖြစ်စပြုတဲ့ နို့သီးခေါင်းတွေနှင့် abs တွေကိုပေါ့။ သူ့ လက်တွေဟာ ကြမ်းရှစွာ ပွတ်သပ်နေပေမဲ့ ကြက်သီးမွှေးညှင်းထအောင် စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။
'အစ်ကို....ညီလေ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အရာအားလုံး အသစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ Fuck!! '
သူ့အသက်ရှူသံတွေ ခပ်လေးလေးဖြစ်နေတယ်။ ကြည့်ရတာ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသလို တပြိုင်နက်တည်းမှာ turn-on လည်းဖြစ်နေတာနေ မှာပါ။
'တခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ စွဲဆောင်မှုကို ညီ မခံရဖူးဘူး'
'အစ်ကိုနဲ့ ဒီလိုနေဖြစ်တာ ကသိကအောက် မဖြစ်ဘူးလို့ ညီမျှော်လင့်ပါတယ် အရာအားလုံးဟာ ညီ့အတွက် ခန္ဓာဗေဒ လေ့လာမှုအသစ် ပဲဗျ'
'မင်း...တစ်နေ့ကို နှစ်ခါလောက် -ွင်းထုတာဆိုတော့ ခန္ဓာဗေဒကို ကောင်းကောင်း သိသင့်တာပေါ့ကွ...ဟ..ဟ'
ကျွန်တော်ပြောတာ မှန်ကန်ကြောင်း မထောက်ခံပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်တွေနှင် ရစ်ပတ်ရှက်နွယ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်ဆောင် သွားပါတော့တယ်။ သူ နောက်ကလိုက်ဝင်လာရင်း ရေချိုးခန်းတံခါးကို လော့ခ်ျချလိုက်ကာ ရေအေးခလုပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါရော။ အေးမြ သောရေဟာ ချွေးရွှဲနေသော နှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ်တွေကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ရေချိုးခန်းလေးဟာ သေးငယ်တော့ ကျွန်တော့်ကျော ပြင်ဟာ နံရံမှာထိနေပြီး သူသည်လည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့။ ရေစက်တွေ တဝေါဝေါ ဆင်းနေတဲ့အောက် နှစ်ဦးသား မျက်လုံးချင်းဆုံ ကြည့်ရင်း ငြိမ်နေမိကြတာ ခဏကြာတယ်။ ဝေဖြိုးခမျာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ရှေ့တစ်လှမ်းတက် ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးဆီ ဖိကပ် ရင်ခြင်းအပ်ရင်း ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ည္ဓစ်တယ်။ ပြီးတော့ ခရေ၀ကိုလည်း လက်ချောင်းတွေနှင့် နှိုက်သေးတာ။ စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုဘဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း ခပ်ဖွဖွကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ငှင်ကစားပြန်ရဲ့။ ကျွန်တော်က ဘာပြန်လုပ်နိုင်မှာလဲ.... သူအဲဒီလိုလုပ်နေ တုန်း ကျစ်လစ်သန်မာတဲ့ သူ့လက်မောင်းဆုံကြီးတွေကို အနမ်းပေနေမိရတာပေါ့နော်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူရေအပူချိန်ကို ချိန်ညှိလိုက်ပြန်တယ်။
'အာ...အ..အာ....' သူ့နှုတ်ခမ်းသားနုလေးတွေနှင့် ကျွန်တော့်နားရွက်တွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ခပ်တိုးတိုး စကားဆိုတယ်။ 'အစ်ကို့ကို -ိုး ချင်တယ်ဗျာ...အိုကေတယ် မဟုတ်လား?'
အခုတော့ သူ့အလုပ်ခံရတော့မယ်ပေါ့။ အရင်တုန်းက အလုပ်ခံရတာ သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ အခုအချိန်လေးမှာတော့ သူ့ပစ္စည်းရဲ့ လက်မ တိုင်းကို ကျွန်တော့်ထဲ ထည့်ထားချင်သား။ သူ့ဘက်ကို ကျောပေးလိုက်တော့ ဖောင်းကြွပြီး တင်းကျစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို အားရပါးရကိုင်တွယ်ရင်း သူ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ ပွတ်သပ်ဖိကပ်ပါရော။ ခပ်ထွားထွား ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀စီ ဖိပြီး တဖြည်းဖြည်းသွင်းတယ် လေ။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ထားသလိုပဲ။ လက်တစ်ဘက်က ကျွန်တော့်ခါးကို ထိန်းကိုင်ထားကာ တခြား လက်က ကျွန်တော့်ပခုံးကိုဖမ်းဆွဲထားရော။ တဖြည်းဖြည်း ဖိသွင်းလိုက် ကြွလိုက်လုပ်နေတာဗျ။
'အစ်ကို့ အပေါက်ကို တံတွေးများများဆွတ်ပေးပါလား၊ ကျွန်တော့် -ီးကိုရော'
တံတွေးနည်းနည်းထည့် သူ့ငပဲကို အပေါက်ဝပြန်တပ်ကာ ဖိသွင်းစေလိုက်တယ်။ ခဏတော့ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေပေမဲ့ သူနံရံကို နောက်ပြန်မှီလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို သူ့စီဆွဲယူလိုက်ပါရော။ မတ်ထောင်နေတဲ့ ငပဲပေါ် ဖိဖိထိုင်ရတာ အရမ်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ နည်းနည်းတော့နာတယ်။ ကောင်လေးက တထစ်ခြင်း ဖိသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတာ။
သူ့ငပဲကို တဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်ကာ တံတွေးများနှင့် ဆွတ်ပြီးမှ ခရေ၀ထဲပြန်ထည့်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နည်းနည်းပိုပြီး ချောမွေ့လာ ပါရဲ့ အသွင်းအထုတ်။ အိုး....ရင်ထဲမှာ လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေ ထနေသလိုပဲ ခံစားရတာ။ သူလည်း ဖီလင် good နေဟန်ဖြင့် အထုတ်အသွင်း တစ် ချက်ခြင်းဖြစ်လိုက် ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေရဲ့။ တစ်ချက်ခြင်း အဆုံးထိ ဖိသွင်းလိုက်ပြီးနောက် ခဏငြိမ်နေကာဆက် တိုက်ဆောင့်ပါတော့တယ် အရှိန်ပြင်းစွာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး။ ကျွန်တော့်နားထဲကြားနေရတာက ရေတွေ တဖြန်းဖြန်းကျသံ၊ ကျွန်တော့် လည်ဂုတ်နားက သူ့အသက်ရှူသံပြင်းပြင်း၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်နှလုံးခုန်သံ စည်းချက်။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ရင်း လှုပ်ရှားနေသလို ကျွန်တော့်လည်ဂုတ်သားနှင့် ပခုံးတွေကို ၀ါးမျိုတော့မယ့်အတိုင်း သွားဖြင့်ကိုက်ရဲ့။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ် လုံးလည်း သူ့လက်အောက်မှာ ယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားနေတာပေါ့။ ကျစ်လစ်ပြီးမာကျောလှတဲ့ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ တွင်းတူးနေတာ တစ်ချက် တစ်ချက် သူ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ တစ်မျိုးပဲ။ ဇကောဝိုင်းလုပ်တာ သူကြိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့အသက်ရှူသံဟာ ဖီးလ် အရှိန်မြင့်ပြီး ညည်းညူနေတဲ့ ပုံဟန်ပြောင်းလဲစပြုလာပါပြီ။
ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ အေးစက်နေသော ပလတ်စတစ်နံရံနှင့် နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက်ဖြင့် သူ့ဆောင့်သွင်းလှုပ်ရှားမှုအောက် မျောပါ နေတာ ခဏတော့။ တဖြန်းဖြန်းကျနေတဲ့ ရေပန်းကို သူပိတ်လိုက်ပြီးနောက် အ၀တ်တင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ တန်းတွေကို ကိုင်ထားစေရင်း နေရာရွှေ့လိုက်ရပါတယ်။ အခုတော့ ရေချိုးခန်းနံရံက မှန်ချပ်ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရပြီပေါ့။ သူ့ငပဲကြီးကို အသာအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း တံတွေးခပ်များများဆွတ်ကာ ကျွန်တော့် ခရေတွင်းထဲ အင့်ကနဲနေအောင် ပြန်သွင်း ပါတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ တင်းရင်းနေတာပဲ။ ကြွက်သားတိုင်းဟာ အဆင်ပြေစွာလှုပ်ရှားရင်း ကျွန်တော့်ကို -ိုးဖို့အဆင်ကိုပြေလို့။ ကျွန်တော် ကျစ်လစ်သန်မာပြီး လှပနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို ကြည့်နေရတာချစ်တယ်။ ကျွန်တော်အရင်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ဒီလိုနေပေးဖို့ဆိုတာ အဝေးမှာပါ။ အခုတော့ ဒီဘဲ-ိုးတာကို ခံရတာ ဘာအကြောင်းအရာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ သူ့ထိန်းချုပ်မှု အောက် အလိုက်သင့်မျောပါရင်း အသွေးအသားထဲက တစိမ့်စိမ့်။
'Fuck! အစ်ကို့ဖင်က ကြပ်သိပ်နေတာပဲဗျာ၊ ဖီလင် အရမ်းမိုက်တယ်'
အ၀တ်တန်းကို အားပြုထားရတာက သူ့အရပ်နှင့်ဆို အများကြီးကသိကအောက် ဖြစ်စေတယ်ထင်ရဲ့။ ဒါကြောင့် သူ့ငပဲကိုပြန်ထုတ် လိုက်ရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းတဲ့ အနေအထားပြောင်းပေးလိုက်ရပါ၏။ 'အ...'မပြောမဆို ဆောင့်ပြီး သွင်းလိုက်တာ လျောကနဲ အဆုံးထိဝင်သွားရော။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံတတ်တာ သူ့အကြိုက်ထင်ပါတယ်။ မှန်ထဲကနေမြင်ရတဲ့ နှစ်ဦးသား လိင် ဆက်ဆံပုံမြင်ကွင်းဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုသွေးဆူစေပါရော။ သူဆောင့်သွင်းတိုင်း တုန်ခါသွားတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေ၊ ခပ်တုတ်တုတ် ငပဲ တစ်ချောင်းလုံး ဖင်ထဲ အ၀င်အထွက်ဖြစ်နေတာတွေလေ....'အား...ရှီး'။ ဝေဖြိုးဆိုတဲ့ သူက ကျွန်တော့်ခါးကို ထိန်းကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားရတာ အတော်ကြိုက်ဟန်တူတယ် ခါးကိုမြဲမြဲကိုင်ထားတာဗျ။ မှန်ကတစ်ဆင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့ သူ့မျက်နှာက အံကိုကြိတ်မေးကြော တွေထောင်လို့။ရေစိုနေတဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကလည်း ပခုံးတ၀ိုက်မှာ ဝေ့၀ိုက်ကျနေရဲ့။ ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်ပေါ်ထောက်ထားတဲ့ လက်တွေ ပေါ် မှောက်အိပ်၊ မျက်လုံးကိုပိတ်ကာ သူ့ရဲ့ပြုစုနေမှုများကို သာယာလိုက်ပါတယ် ခဏပေါ့။
သူဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူဆိုတာ ပြောနိုင်ပါရဲ့။ မိနစ် ၂၀လောက် နောက်ကနေ လှုပ်ရှားနေတာ ငြောင်းငြာလာပုံရပေမဲ့ ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောတာကြောင့် ရပ်တန့်ဖို့ အမူအယာကို မပြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အလိုက်တသိ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်အိပ် ဒူး တွေကို ရင်ဘတ်ဆီကိုကွေးတင်လိုက်ကာ အနေအထားပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့်ခြေချောင်းတွေကြားနေရာပြန်ဝင် လိုက်ရင်း မပျော့သေးတဲ့ ငပဲမာမာကို တထစ်ခြင်း ပြန်သွင်းတာ အဆုံးထိ။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ဆီ မှောက်ချလိုက်ရင်း သူ့တင်ပါးတွေကို သာ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားတာကြောင့် ကျွန်တော့်ခြေတံတွေကို သူ့ခါးမှာချိတ်ထားလိုက်ပါရဲ့။ အဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားရင်း ငိုက်ငိုက်ကျ လာသော သူ့ပခုံးတွေကို ကျွန်တော့်လက်တွေနှင့် သိုင်းဖက်တာလည်းပါရဲ့။ လျောကနဲ...လျောကနဲ ၀င်လာတဲ့ ငပဲကြောင့် ကျွန်တော့် တင်ပဆုံထဲမှာ ဘာကိုထိခတ်မိမှန်းမသိ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါသလိုဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး ဆောင့်ချက်ခပ်သွက်သွက် သူလှုပ်ရှားနေစဉ် ကျွန်တော် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ် လုံးဝမထိပေမဲ့ climax ဖြစ်ဖို့နီးလာပြီဆိုတာ သိလာရပါပြီ။
ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမခံစားဖူးဘူး။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး မီးထဲရောက်နေသလို ပူနွေးနေကာ ကျွန်တော့် လက်ချောင်းတွေ၊ ခြေချောင်းလေးတွေ အကုန် မထိန်းချုပ်နိုင်စွာ ကွေးညွှတ်ကုန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေတံတွေက သူ့ခါးကို ချုပ်ထားမိသလို သူ့ပခုံးတွေ လည်တိုင်တွေ လက်တွေဖြင့် ဖက်တွယ်ထားမိတာပေါ့။ အရာအားလုံးဟာ ဖြစ်ပျက်တာတွေ မြန်နေသလိုပါပဲ။ သူ့ပါးစပ်က မာန်ဖီသံတွေ လို အော်ညည်းလာသလို ဆောင့်သွင်းချက်တွေကလည်း မြင့်သထက်မြင့်။
သူ တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ့ဆီဆွဲယူကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကို တက်မက်စွာ နမ်းပါရော။ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူငုံ ခဲပြီး ငပဲကိုတစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းသွင်းလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ငပဲက သင်္ကြန်ရေပြွတ်လို ချွဲကျိသော အရည်တွေ ဗိုက်သားတွေပေါ်ဖြန်း ပက်လိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့အနမ်းတွေ ကျွန်တော့်လည်တိုင်ဆီ ပြောင်းလိုက်ချိန်မှာ ခံစားမိရတာက ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ နွေးကနဲ နွေး ကနဲ ခံစားလိုက်ရတာပါ။ သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်လျော့လာကာ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခရေ၀ကနေ သူ့ငပဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဆွဲထုတ်တာဗျ။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သူလှဲချလိုက်ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံတွေ ပြန်မှန်လာကြပြီပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ စကား မပြောဘဲနေမိကြပြီးမှ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြပါတယ်။
'ဒီလိုမျိုး အားရပါးရ ပြီးဆုံးတာမျိုး မဖြစ်ဖူးဘူး အများကြီးထွက်ပစ်တာ'
သူ့ကြည့်ရတာ ဖြစ်ပျက်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ လိင်ပတ်သက်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ် စိတ်လှုပ်ရှားဝေခွဲမရဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ ခံစားနေရမှု ကို ပြောဆိုပြသလို မေးခွန်းတွေထုတ်နေပါရဲ့။
'မယုံနိုင်စရာကောင်းမွန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲလေ၊ အမျိုးသား တစ်ယောက်နှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းသက်သက်ပဲ'
'မင်းရဲ့အာသာဆန္ဒကို ပြည့်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဟုတ်?'
ကျွန်တော့်စကားတွေကြားတော့ သူသက်ပြင်းတစ်ချက်ချကာ သူ့နှုတ်ခမ်းမှာ အပြုံးဆင်တယ်။ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို ဖမ်းယူကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံကို ကိုင်တွယ်လိုက်ရင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ပါလေရဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ဆီ သူ့ငုံ့ကိုင်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းပါတယ် ဆက်ပြီးတော့။
'မင်း...အစ်ကို့ကို မနမ်းဘူး ထင်နေတာ'
လက်မအနည်းငယ်သာခြားတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း အနမ်းခပ်ပြင်းပြင်းသူပြန်ပေးပါတယ်။
အ၀တ်တွေ အားလုံးနေသားတကျ ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ကြပြီး အ၀တ်လဲခန်းထဲက အထွက် ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ဒိတ်ကနဲဖြစ်သွားရ သလို ဝေဖြိုး ခြေလှမ်းတွေမှားကုန်ရပါတယ်။ အားကစားခန်းမထဲမှာ ကစားသူအချို့နှင့်အတူ နည်းပြလေးတွေ ပြန်ရောက်နေပြီမို့။ ဟန်မပျက် ဝေဖြိုးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း ထိုင်နေကျခုံကိုပြန်လာထိုင်လိုက်ပါရဲ့။ တဖြည်းဖြည်း Gym တံခါးမှထွက်ခွာသွားတဲ့ ဝေဖြိုးကို ကြည့်နေရင်း ပြတင်းတစ်ခုကို အကြည့်ရွှေမိတော့ နည်းပြသစ်လေး 'ဇော်နိုင်'က ငါသိပါတယ်ဆိုတဲ့ အရိပ်ကဲတဲ့ မျက်ဝန်းတွေဖြင့် ကြည့် နေတာကို မြင်လိုက်ရပါရော။
ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံး နှင်းဆီခင်းဖြစ်ရပြီ။
Alex Aung (21-11-10)
Posted by Alex Aung at 4:34 PM No comments: